Nintendo Classic Mini, anyị nwalere obere Nintendo console | Akụkọ akụrụngwa
Nintendo Classic Mini, anyị nwalere Nintendo mini njikwa
Alfonso De Frutos | | Ngwa, Videogames
Nintendo juru site n'ịkpọsa Nintendo Omuma Obere, otu belata mbipute nke ihe mbụ desktọọpụ egwuregwu nke ụlọ ọrụ ahụ, NES ma ọ bụ Famicom a maara nke ọma na Japan na nke ahụ ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ọzọ 30 nke egwuregwu kachasị mma nke njikwa akara ngosi a.
Ugbu a, ọ bụ ezie na njikwa ahụ ga-aga ahịa na November 11 na ọnụahịa nke euro 60, anyị na-ewetara gị mmetụta mbụ anyị mgbe anyị nwalechara njikwa ọhụrụ nke ndị dike Japan. Nintendo NES - njikwa ...na ị nwere ike ịzụta ebe a. »/]Echefula nyocha vidio anyị nke Nintendo Classic Mini!
1 Nintendo Classic Mini nwere otu imewe ahụ dị ka nke mbụ NES, ọ bụ ezie n’obere usoro
2 A interface dị mfe ma dị irè
3 Ahụmịhe egwuregwu na-atọ ndị Nintendo ụtọ
3.1 Egwuregwu dị na Nintendo Classic Mini
Nintendo Classic Mini nwere otu imewe ahụ dị ka nke mbụ NES, ọ bụ ezie n’obere usoro
Dị ka ị hụworo, aesthetically yiri nke mbụ NES si 1985 ọ bụ ezie na Nintendo Omuma Obere bụ ifipụta nta, dabara adaba na nkwụ nke otu aka, na-erikpu n'ezie obere. The ọzọ nnukwu ihe dị iche bụ na e nweghị oghere maka cartridges ebe egwuregwu na-ama-arụnyere na console na anyị agaghị enwe ike mụbaa ya katalọgụ.
Nhazi ahụ dị mfe ma dị irè. N'ụzọ nke a, na azụ nke NES Mini anyị anyị ga-ahụ mmepụta HDMI jikọọ console gị na ihuenyo ma ọ bụ telivishọn (USB na-esịne ke mkpọ) na ọzọ USB n'ọdụ ụgbọ mmiri maka ike. Kpachara anya, ihe nrụpụta USB a bụ naanị iji chaja na-abịa na njikwa ahụ, yabụ anyị anaghị akwado iji chaja ọzọ karịa nke a na-enye mgbe ị na-azụ njikwa ahụ.
Akụkụ nke Nintendo Omuma Obere bụ ebe ikuku ventila dị, ebe anyị nwere ihu ma gbanye bọtịnụ console na mgbakwunye na bọtịnụ iji tọgharịa ya.
El NES Obere njikwa atụmatụ otu imewe ka nke mbụ: ọmarịcha obe isi nke ga - enyere anyị aka ịkwaga, ala ma ọ bụ n'akụkụ n'akụkụ mgbakwunye A, B, Họrọ na Malite. Mmetụta dị n'aka dị ezigbo mma icheta njikwa mbụ. Bọtịnụ na-enye njem dị mma na mmetụta na-adịgide adịgide. Iji tinye otu ihu, kwuo na eriri njikwa dị mkpụmkpụ n'ihi ya, anyị ga-enwerịrị ihe njikwa dị anyị nso ka anyị kpọọ, nkọwa nke na-enweghị m mmasị.
A interface dị mfe ma dị irè
El menu Nintendo NES Mini bụ nnọọ mfe ma kensinammuo. Na nchịkọta nhọrọ anyị nwere ike ịgbanwe asụsụ (dị na Bekee, French, Dutch, German, Spanish, Portuguese, Italian na Russian) yana ozi gbasara iwu na akwụkwọ egwuregwu.
Otu nhụjuanya dị egwu nke ndị egwuregwu n'oge ahụ bịara n'eziokwu na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu ekweghị ịchekwa egwuregwu ahụ n'oge ọ bụla. Na Nintendo Omuma Obere ihe gbanwere ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịchekwa egwuregwu ahụ n'oge ọ bụla. Ọbụna egwuregwu na-echekwa site n'oge ruo n'oge na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ha ejedebe igbu gị. Ibu egwu egwuregwu echekwara na ọ dị mfe dịka ịga na nchịkọta nhọrọ na imeghe ngalaba "nkwusioru" ebe anyị nwere ike ibudata egwuregwu anyị echekwara.
N'ebe a, abụ m onye na-enweghị ihe ọhụụ ma ana m ewere ya na ịjụ okwukwe ka m nwee ike ịchekwa egwuregwu ahụ n'oge ọ bụla, agbanyeghị na ọ dị jụụ na ọ bụrụ na m bụ ndị Taliban dị ka m. ị ga-enwe ike ịnọgide na-azọpụta egwuregwu dị ka nkịtị mgbe egwuregwu nke uzo-enye ya.
Ikwu ya na ije site na dị iche iche menus nke console na-rụrụ na a nnọọ ọmụmụ ụzọ na ahụghị m ihe ọ bụla lag mgbe ọ bụla. Ọbụna ịgbanye ihe njikwa ga-eju gị anya na ọsọ ya nke mmeghachi omume. Ọ bụ ezie na ọ bụkwa ihe ezi uche dị na ya ịtụle teknụzụ chọrọ dị mkpa iji bugharịa egwuregwu ndị a.
Ahụmịhe egwuregwu na-atọ ndị Nintendo ụtọ
Nintendo ahọrọbeghị ndị ochie 30 nke na-abata na Nintendo Classic Mini na Nintendo Classic Mini, mana onye nrụpụta ahụ chọrọ ịnye ụdị dịgasị iche iche nke ga-enyere anyị aka iji mma agha na Link, na-aga n'ihu ịchekwa adaeze na Mario ruo mgbe anyị rute Ugboro abụọ Dragọn. Ndepụta zuru oke nke ị nwere ike ịmasị ma ọ bụ na-erughị, m na-atụ uche egwuregwu ahụ, mana a ga-amata na ọ dị iche iche ma na-atọ ụtọ.
Egwuregwu dị na Nintendo Classic Mini
Ugboro abụọ dragọn II: ịbọ ọbọ
Nwoke Mega 2
Punch-out !! Na-ekwu banyere Nrọ
The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda
Dịka enweghị oge ịgba, ihe egwuregwu na-egwu egwu dị ezigbo mma. Tụkwasị na nke ahụ, eziokwu nke inwe ike ijikọ onye mbụ Nintendo NES njikwa ma ọ bụ ọbụna Wii remote na-eme ka ihe dịkwuo mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu na enyi ọzọ. N'ezie, buru n'uche na ị nwere ike ijikọ Wii remote ebe ọ bụ na otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ga-ejikọrịrị ya na nke mbụ nke na-abịa na njikwa.
Enweela m ike ịnwale ọtụtụ egwuregwu, Mario Bros na dragọn abụọ na ahụmahụ ahụ bụ kpọmkwem otu ihe ahụ dị ka mgbe mbụ m nwara ha na onye m hụrụ n’anya Nintendo NES, na-enye m ohere icheta oge ochie ọchị. Ọ bụ ezie na isi mkpịsị aka m na-egbu nri mgbe ọtụtụ awa nke bọtịnụ na-akụ adịghị ike dịka ọ dị na mbụ. Callus ga - apụta ...
N'ikpeazụ achọrọ m ịme isiokwu doro anya: Egwuruwo m ọtụtụ narị egwuregwu Nintendo na emulators ka m ghọta na ọtụtụ n'ime gị ga-ajụ onwe gị ihe kpatara ịkwụ ụgwọ maka njikwa a. mgbe ha bịara “naanị” egwuregwu 30 ma ọ bụrụ na ị nwere ike igwu egwuregwu Nintendo vidiyo ọ bụla n’efu site na ịntanetị na iji emulator. Nke a bụ nhọrọ nke ọ bụla.
Onwe ya bu eziokwu megharia egwuregwu ndia na Nintendo console, nke Enwere m ike iburu ya ebe ọ bụla ebe ọ bụ na ọ bụ n'ezie obere na-enwe ike ájá apụ m ochie NES njikwa, ọ ka na-arụ ọrụ! Ọ karịrị ụgwọ 60 euro ọ na-efu.
Ekwuru m, ihe nkụja na-atụ n'anya na ejiri m n'aka na ọ ga-abụ nnukwu onye mgba nke Ekeresimesi a. Gịnị ka ị na-eche maka ịchekwa Nintendo Ochie NES!
Nintendo NES - njikwa ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Nintendo Classic Mini, anyị nwalere Nintendo mini njikwa
Facebook Messenger ga-agbakwunye ọnọdụ iji chekwaa data
Zetta Smartphone, "Spanish Apple" nke jisiri ire anwụrụ ọkụ